Dhib u dhis iyo banyan lagu sameeyano laba garoon oo ku yaala xaafada 26 June
You are here: Home somal Dhib u dhis iyo banyan lagu sameeyano laba garoon oo ku yaala xaafada 26 June
Maayorka Caasimada Hageisa oo Dhagax dhigay Garoonka Xadaawle iyo Garoonka wayne ee Shulaac
Waxa uu maayarka hawlo shaqo ugu baxay labada garoon ee ku yaala xaafada 26 June. Kuwaas oo kala ah Garoonka Xawaadle iyo Garooka Shulaac.
Maayorka oo ay wehelinayaan xildhibaano ka tiran golaha dageenka, gudoomiyaha xaafaa 26 june, joomitiro dii dawlada hoose, Ururka AYD iyo gudida labada garoon ayaa halkaas waxa u maayorku ka balan qaaday uuna dhagax dhigay in uu labadaa garoon ka dowlad hoose ahaan uu bilaabidoono dhismahooda.
Garoonka xawaadle waxa laga bilaabay jabinta dhagaxaan waaweeyn oo ka soo baxay garoonka dhexdiisa, waxaa kale oo loo sameeyn doonaa dayr xayn daab u noqda garoonka .
Dhanka kale wuxuu maayarku indho indhayn ku tagay garoonka way nee Shulac eek u yaala waqooyiga magaalada hargeisa. Halkaas oo uu amar ku bixiyay in la baneeyo lana xaadho. Si logu sii ciyaari karo inta aan hawsha dhisida laga bilaabin. Garoonka oo noqondoona garoon wayn oo ay caasimadu yeelato noqona doona ka soo labeeya . una soo kordhayay caasimada